ငွေ ၉၀၀၀ ဝန်းကျင်နဲ့ သုံးထပ်သားကင် BBQ အဝတစ်မုန်းစားပစ်မယ်
8 Oct 2018 . 6:14 PM
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားသွားပြီမလား? အဟုတ်ဗျား ငွေတသောင်းမပြည့်တဲ့ ၉၈၀၀ အသားတင်နဲ့ ဝက်သား သုံးထပ်သားရယ်၊ ဝက်ဂုတ်သားကို ပြန်လှည့်မကြည့်ချင်လောက်အောင် အဝတစ်မုန်းကြီး စားလို့ရမယ်ဆို….???
ဟိုတလောက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကိုရီးယားသွားလည်တုန်း ကိုရီးယားကားထဲကလို ဝက်သုံးထပ်သားတွေကို ရှဲခနဲမြည်အောင် အငွေ့တထောင်းထောင်းကင်စားကြတာ အရသာဘယ်လိုနေလဲ မေးတော့ ပြည်တွင်းက ဝက်သားထက် ပိုစားကောင်းပြီး ပြန်ပြန်စားချင်စိတ်တောင်ဖြစ်မိသတဲ့။
ကိုရီးယား BBQ ဆိုတာကလည်း သူတို့ရုပ်ရှင်တွေထဲကြည့်ရုံနဲ့တင်သားရေကျပြီးစားချင်လာတာမျိုးလေ။ အသားဆို လတ်ဆတ်နေတဲ့ အဆီပါးပါးအသားထူထူ သုံးထပ်သားလေးကို အိုးပူပူပေါ်ကင်၊ မကြွပ်တကြွပ်ရဲလာတဲ့အချိန်လေး ပါးစပ်ထဲထည့် အသားကြွပ်ကြွပ်ကို တဂျွတ်ဂျွတ်မြည်အောင် ဝါးစားရတာ အာဂလျှာစည်းစိမ်ပဲမို့လား?
ဒီတော့ကာ ရန်ကုန်က ငါလေးလည်း အားကျမခံ ရန်ကုန်တမြို့လုံးမွှေနှောက်ရှာပြီး Korea BBQ စားမဟဲ့ဆိုပြီး ပြင်တုန်း နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကိုရီးယားလူကြီးပုံနဲ့ Willy’s Korea BBQ ဆိုင်ကို မျက်လုံးထဲမြင်ပါရောလား။
Willy’s က ၁၉လမ်းထဲမှာတစ်ဆိုင်၊ အင်းစိန်လမ်းမပေါ်တစ်ဆိုင် ၂ဆိုင်ရှိတဲ့ထဲကမှ ရုံးနဲ့နီးနီးနားနား အင်းစိန်လမ်းမပေါ်က ဆိုင်ကို ဘော်ဒါတစ်ယောက်နဲ့ ၂ယောက်သွားဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…
တော်တော်တန်တန်လေးပဲ အရမ်းကျယ်တာမဟုတ်သလို အရမ်းလည်း မကျဉ်းဘူး။ ဆိုင်က ကိုရီးယားက လမ်းဘေးဆိုင်တွေထဲဝင်ရသလို ဘာ အလှမှမဆင်ထားတဲ့ ခပ်ရိုးရိုးဆိုင်ပဲ။ အပေါ်ထပ်အောက်ထပ်ရှိတယ်။ အပေါ်ထပ်ကတော့ ပို လင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်တယ်။ အေးဆေးစားချင်ရင်တော့ အပေါ်ထပ်လေးက ပိုကောင်းပါတယ်လို့။
အဲ့မှာသတိထားမိတာက မီးခိုးစုပ်စက်တွေက ထင်သလောက် မစုပ်ဘူး။ Aircorn ထင်သလောက် မအေးဘူး။ စားပွဲတွေက ကပ်ရပ်တွေဆိုတော့ လူများတဲ့အချိန် သွားမစားတာ ပိုပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ တခါတည်း ကိုယ့်လူတွေအတွက် လူရှင်းချိန်လေးမေးခဲ့တာ နေ့လည်ခင်းချိန်တွေ လူရှင်းတယ်တဲ့။ ညနေစောင်းတော့ ရှောင်ဗျို့။
Willy’s က ၂မျိုးရ စားသောက်ဆိုင်ပါ။ ၂မျိုးရဆိုလို့ ဒီလို။ ဝက်သားကင်အဝစားကျတော့ တစ်ယောက် ၉၈၀၀ ကျပ်အပြီးအစီးနဲ့ အချိန်မကန့်သတ်ထားတာရယ်၊ နောက်တမျိုးက ကိုရီးယားစာစစ်စစ်တွေချည်း ပွဲကြီးပွဲငယ်နဲ့ တစ်ပွဲ ၄၊ ၅ထောင်ဝန်းကျင် A La Carte Menu ရယ် ၂မျိုးရတယ်။
ဝက်သား BBQ အဝစားစနစ်
ဝက်သားကိုမှ ယိုးဒယားကတင်ပို့တဲ့ Imported Quality ဝက်ဂုတ်သားနဲ့ ဝက်သုံးထပ်သားကို အပြားအကြီးကြီးတွေ၊အတုံးအကြီးကြီးတွေ တုံးပေးထားပါသတဲ့။ အသားမှာ ဝက်ဆိုတဲ့ထဲကမှကို ဝက်သားထဲမယ် အနူးညံ့ဆုံး ဆိုတာကလည်း အဆီတစ်ထပ်၊ အသားတစ်ထပ်နဲ့ စားလိုက်ရင် လျှာထဲရှယ်မြိန်တဲ့ သုံးထပ်သားရယ်၊ ဘယ်လိုစားစား နူးညံ့တဲ့ ဝက်ဂုတ်သားက အကောင်းဆုံးဆိုတော့ အကောင်းတွေချည်း Unlimited အဝစား ပေးထားတာနဲ့တင် တော်တော်တန်နေပြီပဲ။
ဝက်ချည်းစားရတာ ရိုးမှာ၊ အီမှာကြောက်ရင်တော့ ဆိုင်၂ဆိုင်ထဲက အင်းစိန်လမ်းမ ဆိုင်ခွဲကတော့ Side Dish တွေပါအဝစားပြင်ပေးထားသေးသပါ့။
ကိုရီးယားတွေအားရပါးရထမင်းနဲ့စားတဲ့ ကြက်ဥပန်ကိတ်၊ ချဉ်စပ်စပ်ကင်ချီဟင်းချို၊ ရေညှိဟင်းချို၊ ဝက်အချိုသီးစုံကြော်၊ ဝက်သားနဲ့ရေဘဝဲချဉ်စပ်ကြော်၊ ပဲထမင်း အဲ့လို ဂွတ်ရှယ်ကြီးတွေ အဝ၊ အဝစားပဲ။
ကျန်တာတွေကတော့ တမျိုးစီ ဘာစားစား တော်တော်လေး စားကောင်းပါရဲ့။ ရေညှိနဲ့ကင်ချီဟင်းချိုကတော့ တစ်ခါတည်းချက်ပြီး ဗန်းထဲထည့်ထားတော့ ခပ်အေးအေးကြီးနဲ့ သောက်လို့ သိပ်မကောင်းတော့ဘူး။ အရသာကတော့ ကောင်းတယ်နော်။ ဟင်းချိုအေးအေးကြီးဆိုတော့ ဖီးလ်ငုပ်တာပေါ့။ ဝက်သားနဲ့ရေဘဝဲမှာလည်း ရေဘဝဲလေးတွေပုန်းနေသလားမှတ်ရ။ မမြင်ခဲ့ရဘူး။ ဝက်သားတွေချည်းပဲ။ စားလို့တော့မြိန်သား။ ထမင်းနဲ့ဆို ပိုမြိန်မယ်။
အဓိက မင်းသားအကြောင်းခုမှ ပြောပါရစေ။ ဝက်ဂုတ်သားနဲ့ သုံးထပ်သားကို အပြည့် ဗန်းထဲထည့်ထားတာကိုမှ ကြိုက်သလောက်ယူပဲ။ အဲ့အသားဆိုတာလေ အကင်အိုးပေါ်တင်လိုက်တာ မီးအားလည်းပြင်းတော့ ခနလေးနဲ့ ကျက်တယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက အသားကိုသူပေးထားသလို အပြားကြီးအတိုင်းမကင်ဘဲ အရောင်နည်းနည်းရဲလာတာနဲ့ အတုံးလေးတွေ ညှပ်ချလိုက်ဖို့ပါ။ အဲ့ဒါမှ အကျက်ပိုမြန်မှာနော်။
ကဲ…အသားလေးတွေ တစီစီနဲ့ အဆီတွေထွက်ပြီး ကျက်ပြီဆို ဆလတ်ရွက်လေးတွေပေါ်တင် သူ့ဆိုင်က ရှယ်ကောင်းတဲ့ကင်ချီဖတ်လေးခပ်များများလိပ်ထည့်၊ ပဲငါးပိလေး ပါလေကာထည့်၊ ကြက်သွန်ဖြူခြမ်းလေး၊ ငရုတ်သီးစိမ်းခြမ်းလေးထည့်၊ လိပ်ချလိုက်၊ ပြီးရင် အဲ့ပလုပ်ပလောင်းကြီးကို ပါးစပ်ထဲဖြဲပြီးထည့်၊ တဂျွမ်းဂျွမ်းမြည်အောင်ဝါး၊ အစားကောင်းစားနေရတဲ့အခါ သီးသန့်ရတဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုဂလင်းတွေပွင့်ထွက်လာတာများဗျာ။ စားရင်း၊ ဝါးရင်း ကျေနပ်စရာပါ။
အဓိကက ဝက်ရဲ့အသားကိုက ဘာဆော့စ်မှ နယ်စရာမလိုဘဲကို တော်တော်စားကောင်းတာမျိုးဗျ။ အသားနံ့ နံတာဘာညာရယ်လည်းမရှိ၊ ကင်နေတုန်းသူတို့ချပေးတဲ့ နှမ်းဆီလေးများသုတ်သုတ်ပြီးစား သူ့ချည်းတင်စားကောင်းနေတာ။
ရန်ကုန်မှာ လူတိုင်းနီးပါးတော်တော်ကြိုက်ကြတဲ့ နာမည်ကြီးဆိုင်က ဝက်သားဆလတ်တစ်ပွဲ ၅၀၀၀ တန်မှာတောင် ဆလတ်ရွက်ဆိုတာမျိုးက လိုရင်ထပ်ဝယ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ Willy’s က ဘာယူယူ ကင်ချီ၊ ဆလတ်ရွက် အကုန်အစုံ Free Flow Unlimited ပဲဆိုတော့ စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ စားရသောက်ရတာ အကန့်အသတ်တွေနဲ့ဆို သိပ်ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်ရတာ အစားသမားတွေအချင်းချင်းပဲ သိတာကိုး။
မကုန်န်ိုင်ဘဲတော့ မနိုင်မနင်းအများကြီး မယူနဲ့နော်။ Food Waste ဆိုတာ သိပ်နှမျောစရာကောင်းတာကလား။
ဪ ပြီးတော့ ဝန်ထမ်းလေးတွေက မအူမလည်လေးတွေပေမယ့် တော်တော်လေးသဘောကောင်းပြီး ဝန်ဆောင်မှုကတော့ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။ နေ့ခင်းလူရှင်းချိန်မို့လားမသိ လိုတာအကုန် ပြင်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်တော့ မကင်ပေးပါဘူး။
စားရင်း စားကောင်းရင်းကို အရှိန်ထိန်းမိချိန်ကျ သုံးထပ်သား ၅ပြား၊ ဝက်ဂုတ်သား ၄ပြား ကုန်ပြီးပြီ။ လူလည်း ဝါးရတာ အာတညောင်းပဲ။ ဗိုက်လည်း နေ့စေ့လစေ့နီးနီးစူထွက်နေပြီ။ တော်တော်လေးပြည့်လာတော့မှ ငွေရှင်းတာ တစ်ယောက် ၉၈၀၀ အသားတင်ဆိုတော့ တန်တာထက်ကို ဟိုဘက်ကမ်းရောက်ပါတယ်လို့ ခံစားမိတဲ့ထိပဲ။
မတန်တာကတော့ သောက်စရာဘာမှ Free မရှိဘဲ ရေဘူးအသေး ၅၀၀၊ အအေးတဘူး ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ ပေးရပါသတဲ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေကလည်း အသားစားရရုံနဲ့တင် ကျေနပ်ပီတိ ဂွမ်းဆီထိနေတာကလား။ ပျော်ပျော်ကြီးပေးပြီး စားခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။
ကဲ….ဒါမျိုးမှ ဗိုက်မကား ဝက်သားမမုန်းသွားရင် ဘယ်အစားအစာရှိဦးမတုန်း။ အခရာကတော့ တစ်ခါစားပြီး နောက်များလည်း လခထုတ်ရင် သွားစားဦးမယ့်ဆိုင်ထဲ Willy’s ကိုပါ ထည့်လိုက်ကြောင်းပါ။
လိပ်စာနဲ့ ဖွင့်ချိန် ပိတ်ချိန်
အစုံအစိစားချင်ရင်တော့ အင်းစိန်လမ်းမပေါ် ဦးရေခဲလမ်းကပ်ရက် အမှတ် ၉၄၊ အောင်ရိပ်သာလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာစားနော်။
နေ့ခင်း ၁၂ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီထိဖွင့်တယ်တဲ့။ အချိန်မကန့်သတ်ထားတာနဲ့တင် စိတ်ချမ်းသာနေပါပြီနော်။
ကဲ…ဝက်တစ်မျိုးတည်းကိုမှ ကိုရီးယားကားတွေထဲကလို ဆလတ်ရွက်လေးလိပ်ပြီး တဂျွမ်းဂျွမ်းစားချင်ရင်တော့ ဈေးတန်တန်နဲ့ Willy’s သာသွားဖို့ ဗိန်းမောင်းတီးပါရစေဗျို့။
Ratings by Akhayar Food
ငှေ ၉၀၀၀ ဝနျးကငျြနဲ့ သုံးထပျသားကငျ BBQ အဝတဈမုနျးစားပဈမယျ
ခေါငျးစဉျကွညျ့ပွီး စိတျဝငျစားသှားပွီမလား? အဟုတျဗြား ငှတေသောငျးမပွညျ့တဲ့ ၉၈၀၀ အသားတငျနဲ့ ဝကျသား သုံးထပျသားရယျ၊ ဝကျဂုတျသားကို ပွနျလှညျ့မကွညျ့ခငျြလောကျအောငျ အဝတဈမုနျးကွီး စားလို့ရမယျဆို….???
ဟိုတလောက သူငယျခငျြးတဈယောကျက ကိုရီးယားသှားလညျတုနျး ကိုရီးယားကားထဲကလို ဝကျသုံးထပျသားတှကေို ရှဲခနဲမွညျအောငျ အငှတေ့ထောငျးထောငျးကငျစားကွတာ အရသာဘယျလိုနလေဲ မေးတော့ ပွညျတှငျးက ဝကျသားထကျ ပိုစားကောငျးပွီး ပွနျပွနျစားခငျြစိတျတောငျဖွဈမိသတဲ့။
ကိုရီးယား BBQ ဆိုတာကလညျး သူတို့ရုပျရှငျတှထေဲကွညျ့ရုံနဲ့တငျသားရကေပြွီးစားခငျြလာတာမြိုးလေ။ အသားဆို လတျဆတျနတေဲ့ အဆီပါးပါးအသားထူထူ သုံးထပျသားလေးကို အိုးပူပူပျေါကငျ၊ မကွှပျတကွှပျရဲလာတဲ့အခြိနျလေး ပါးစပျထဲထညျ့ အသားကွှပျကွှပျကို တဂြှတျဂြှတျမွညျအောငျ ဝါးစားရတာ အာဂလြှာစညျးစိမျပဲမို့လား?
ဒီတော့ကာ ရနျကုနျက ငါလေးလညျး အားကမြခံ ရနျကုနျတမွို့လုံးမှနှေောကျရှာပွီး Korea BBQ စားမဟဲ့ဆိုပွီး ပွငျတုနျး နာမညျကွီးနတေဲ့ ကိုရီးယားလူကွီးပုံနဲ့ Willy’s Korea BBQ ဆိုငျကို မကျြလုံးထဲမွငျပါရောလား။
Willy’s က ၁၉လမျးထဲမှာတဈဆိုငျ၊ အငျးစိနျလမျးမပျေါတဈဆိုငျ ၂ဆိုငျရှိတဲ့ထဲကမှ ရုံးနဲ့နီးနီးနားနား အငျးစိနျလမျးမပျေါက ဆိုငျကို ဘျောဒါတဈယောကျနဲ့ ၂ယောကျသှားဆှဲကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ…
တျောတျောတနျတနျလေးပဲ အရမျးကယျြတာမဟုတျသလို အရမျးလညျး မကဉျြးဘူး။ ဆိုငျက ကိုရီးယားက လမျးဘေးဆိုငျတှထေဲဝငျရသလို ဘာ အလှမှမဆငျထားတဲ့ ခပျရိုးရိုးဆိုငျပဲ။ အပျေါထပျအောကျထပျရှိတယျ။ အပျေါထပျကတော့ ပို လငျးလငျးခငျြးခငျြးဖွဈတယျ။ အေးဆေးစားခငျြရငျတော့ အပျေါထပျလေးက ပိုကောငျးပါတယျလို့။
အဲ့မှာသတိထားမိတာက မီးခိုးစုပျစကျတှကေ ထငျသလောကျ မစုပျဘူး။ Aircorn ထငျသလောကျ မအေးဘူး။ စားပှဲတှကေ ကပျရပျတှဆေိုတော့ လူမြားတဲ့အခြိနျ သှားမစားတာ ပိုပွမေယျထငျပါတယျ။ တခါတညျး ကိုယျ့လူတှအေတှကျ လူရှငျးခြိနျလေးမေးခဲ့တာ နလေ့ညျခငျးခြိနျတှေ လူရှငျးတယျတဲ့။ ညနစေောငျးတော့ ရှောငျဗြို့။
Willy’s က ၂မြိုးရ စားသောကျဆိုငျပါ။ ၂မြိုးရဆိုလို့ ဒီလို။ ဝကျသားကငျအဝစားကတြော့ တဈယောကျ ၉၈၀၀ ကပျြအပွီးအစီးနဲ့ အခြိနျမကနျ့သတျထားတာရယျ၊ နောကျတမြိုးက ကိုရီးယားစာစဈစဈတှခေညျြး ပှဲကွီးပှဲငယျနဲ့ တဈပှဲ ၄၊ ၅ထောငျဝနျးကငျြ A La Carte Menu ရယျ ၂မြိုးရတယျ။
ဝကျသား BBQ အဝစားစနဈ
ဝကျသားကိုမှ ယိုးဒယားကတငျပို့တဲ့ Imported Quality ဝကျဂုတျသားနဲ့ ဝကျသုံးထပျသားကို အပွားအကွီးကွီးတှေ၊အတုံးအကွီးကွီးတှေ တုံးပေးထားပါသတဲ့။ အသားမှာ ဝကျဆိုတဲ့ထဲကမှကို ဝကျသားထဲမယျ အနူးညံ့ဆုံး ဆိုတာကလညျး အဆီတဈထပျ၊ အသားတဈထပျနဲ့ စားလိုကျရငျ လြှာထဲရှယျမွိနျတဲ့ သုံးထပျသားရယျ၊ ဘယျလိုစားစား နူးညံ့တဲ့ ဝကျဂုတျသားက အကောငျးဆုံးဆိုတော့ အကောငျးတှခေညျြး Unlimited အဝစား ပေးထားတာနဲ့တငျ တျောတျောတနျနပွေီပဲ။
ဝကျခညျြးစားရတာ ရိုးမှာ၊ အီမှာကွောကျရငျတော့ ဆိုငျ၂ဆိုငျထဲက အငျးစိနျလမျးမ ဆိုငျခှဲကတော့ Side Dish တှပေါအဝစားပွငျပေးထားသေးသပါ့။
ကိုရီးယားတှအေားရပါးရထမငျးနဲ့စားတဲ့ ကွကျဥပနျကိတျ၊ ခဉျြစပျစပျကငျခြီဟငျးခြို၊ ရညှေိဟငျးခြို၊ ဝကျအခြိုသီးစုံကွျော၊ ဝကျသားနဲ့ရဘေဝဲခဉျြစပျကွျော၊ ပဲထမငျး အဲ့လို ဂှတျရှယျကွီးတှေ အဝ၊ အဝစားပဲ။
ကနျြတာတှကေတော့ တမြိုးစီ ဘာစားစား တျောတျောလေး စားကောငျးပါရဲ့။ ရညှေိနဲ့ကငျခြီဟငျးခြိုကတော့ တဈခါတညျးခကျြပွီး ဗနျးထဲထညျ့ထားတော့ ခပျအေးအေးကွီးနဲ့ သောကျလို့ သိပျမကောငျးတော့ဘူး။ အရသာကတော့ ကောငျးတယျနျော။ ဟငျးခြိုအေးအေးကွီးဆိုတော့ ဖီးလျငုပျတာပေါ့။ ဝကျသားနဲ့ရဘေဝဲမှာလညျး ရဘေဝဲလေးတှပေုနျးနသေလားမှတျရ။ မမွငျခဲ့ရဘူး။ ဝကျသားတှခေညျြးပဲ။ စားလို့တော့မွိနျသား။ ထမငျးနဲ့ဆို ပိုမွိနျမယျ။
အဓိက မငျးသားအကွောငျးခုမှ ပွောပါရစေ။ ဝကျဂုတျသားနဲ့ သုံးထပျသားကို အပွညျ့ ဗနျးထဲထညျ့ထားတာကိုမှ ကွိုကျသလောကျယူပဲ။ အဲ့အသားဆိုတာလေ အကငျအိုးပျေါတငျလိုကျတာ မီးအားလညျးပွငျးတော့ ခနလေးနဲ့ ကကျြတယျ။ ဒီနရောမှာ ပွောခငျြတာက အသားကိုသူပေးထားသလို အပွားကွီးအတိုငျးမကငျဘဲ အရောငျနညျးနညျးရဲလာတာနဲ့ အတုံးလေးတှေ ညှပျခလြိုကျဖို့ပါ။ အဲ့ဒါမှ အကကျြပိုမွနျမှာနျော။
ကဲ…အသားလေးတှေ တစီစီနဲ့ အဆီတှထှေကျပွီး ကကျြပွီဆို ဆလတျရှကျလေးတှပေျေါတငျ သူ့ဆိုငျက ရှယျကောငျးတဲ့ကငျခြီဖတျလေးခပျမြားမြားလိပျထညျ့၊ ပဲငါးပိလေး ပါလကောထညျ့၊ ကွကျသှနျဖွူခွမျးလေး၊ ငရုတျသီးစိမျးခွမျးလေးထညျ့၊ လိပျခလြိုကျ၊ ပွီးရငျ အဲ့ပလုပျပလောငျးကွီးကို ပါးစပျထဲဖွဲပွီးထညျ့၊ တဂြှမျးဂြှမျးမွညျအောငျဝါး၊ အစားကောငျးစားနရေတဲ့အခါ သီးသနျ့ရတဲ့ စိတျကနြေပျမှုတှေ၊ ပြျောရှငျမှုဂလငျးတှပှေငျ့ထှကျလာတာမြားဗြာ။ စားရငျး၊ ဝါးရငျး ကနြေပျစရာပါ။
အဓိကက ဝကျရဲ့အသားကိုက ဘာဆော့ဈမှ နယျစရာမလိုဘဲကို တျောတျောစားကောငျးတာမြိုးဗြ။ အသားနံ့ နံတာဘာညာရယျလညျးမရှိ၊ ကငျနတေုနျးသူတို့ခပြေးတဲ့ နှမျးဆီလေးမြားသုတျသုတျပွီးစား သူ့ခညျြးတငျစားကောငျးနတော။
ရနျကုနျမှာ လူတိုငျးနီးပါးတျောတျောကွိုကျကွတဲ့ နာမညျကွီးဆိုငျက ဝကျသားဆလတျတဈပှဲ ၅၀၀၀ တနျမှာတောငျ ဆလတျရှကျဆိုတာမြိုးက လိုရငျထပျဝယျရတဲ့အခွအေနမြေိုးမှာ Willy’s က ဘာယူယူ ကငျခြီ၊ ဆလတျရှကျ အကုနျအစုံ Free Flow Unlimited ပဲဆိုတော့ စိတျခမျြးသာရတယျ။ စားရသောကျရတာ အကနျ့အသတျတှနေဲ့ဆို သိပျဆနျ့ငငျဆနျ့ငငျဖွဈရတာ အစားသမားတှအေခငျြးခငျြးပဲ သိတာကိုး။
မကုနျနိုငျဘဲတော့ မနိုငျမနငျးအမြားကွီး မယူနဲ့နျော။ Food Waste ဆိုတာ သိပျနှမြောစရာကောငျးတာကလား။
ဪ ပွီးတော့ ဝနျထမျးလေးတှကေ မအူမလညျလေးတှပေမေယျ့ တျောတျောလေးသဘောကောငျးပွီး ဝနျဆောငျမှုကတော့ စိတျခမျြးသာစရာကောငျးခဲ့ပါတယျ။ နခေ့ငျးလူရှငျးခြိနျမို့လားမသိ လိုတာအကုနျ ပွငျပေးပါတယျ။ ကိုယျတိုငျတော့ မကငျပေးပါဘူး။
စားရငျး စားကောငျးရငျးကို အရှိနျထိနျးမိခြိနျကြ သုံးထပျသား ၅ပွား၊ ဝကျဂုတျသား ၄ပွား ကုနျပွီးပွီ။ လူလညျး ဝါးရတာ အာတညောငျးပဲ။ ဗိုကျလညျး နစေ့လေ့စနေီ့းနီးစူထှကျနပွေီ။ တျောတျောလေးပွညျ့လာတော့မှ ငှရှေငျးတာ တဈယောကျ ၉၈၀၀ အသားတငျဆိုတော့ တနျတာထကျကို ဟိုဘကျကမျးရောကျပါတယျလို့ ခံစားမိတဲ့ထိပဲ။
မတနျတာကတော့ သောကျစရာဘာမှ Free မရှိဘဲ ရဘေူးအသေး ၅၀၀၊ အအေးတဘူး ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ ပေးရပါသတဲ့။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျတှကေလညျး အသားစားရရုံနဲ့တငျ ကနြေပျပီတိ ဂှမျးဆီထိနတောကလား။ ပြျောပြျောကွီးပေးပွီး စားခဲ့တယျပေါ့ဗြာ။
ကဲ….ဒါမြိုးမှ ဗိုကျမကား ဝကျသားမမုနျးသှားရငျ ဘယျအစားအစာရှိဦးမတုနျး။ အခရာကတော့ တဈခါစားပွီး နောကျမြားလညျး လခထုတျရငျ သှားစားဦးမယျ့ဆိုငျထဲ Willy’s ကိုပါ ထညျ့လိုကျကွောငျးပါ။
လိပျစာနဲ့ ဖှငျ့ခြိနျ ပိတျခြိနျ
အစုံအစိစားခငျြရငျတော့ အငျးစိနျလမျးမပျေါ ဦးရခေဲလမျးကပျရကျ အမှတျ ၉၄၊ အောငျရိပျသာလမျး၊ မရမျးကုနျးမွို့နယျမှာစားနျော။
နခေ့ငျး ၁၂ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီထိဖှငျ့တယျတဲ့။ အခြိနျမကနျ့သတျထားတာနဲ့တငျ စိတျခမျြးသာနပေါပွီနျော။
ကဲ…ဝကျတဈမြိုးတညျးကိုမှ ကိုရီးယားကားတှထေဲကလို ဆလတျရှကျလေးလိပျပွီး တဂြှမျးဂြှမျးစားခငျြရငျတော့ ဈေးတနျတနျနဲ့ Willy’s သာသှားဖို့ ဗိနျးမောငျးတီးပါရစဗြေို့။